SA Trade Union to shutdown Beitbridge border - Bulawayo24 News
The' Congress of South Africa Trade Unions (COSATU) will stage a solidarity march with the Zimbabwe Congress of Trade Unions on Wednesday.
"The protest comes as Trade Unions in SouthAfrica, Nigeria and Botswana are standing in solidarity with workers and Trade Unionists in Zimbabwe who are being persecuted, incarcerated, beaten and tortured by the State." COSATU said.
"We are outraged by this brutal crackdown by the government of Zimbabwe on its own people. When a government turns the security apparatus and guns on their own citizens, they no longer deserve power," said Jacobs. "The situation in Zimbabwe is dire – trade union leaders are being arrested on trumped up charges or in hiding, and ordinary civilians are being attacked."
"We will not stand by in silence whilst this violence continues and we offer our full solidarity and support to our Zimbabwean brothers and sisters."
More on: #COSATU, #ZCTU, #ShutdownZimbabwe